तिहारको टिका, माला र भाइमसला छिमेकीमा निर्भर
२ कार्तिक २०७४
२ कार्तिक, पाल्पा । पाल्पा रिब्दिकोट गाउँपालिका वडा नंं ६ की शान्ता थापाले भाईटिकाको लागि टिका, माला, काजु किसमिस, बदाम, र झिनिया रोटी किनिन । थापाले तिहारका लागि किनेका सामानमध्ये झिनिया रोटी मात्र तानसेनमा बनेको हो बाँकी टिका, मालादेखि भाइमसाला भारतबाट ल्याईएका हुन् । नेपालको दोस्रो ठुलो पर्वको रुपमा मनाउँदै आईएको तिहारका लागि चाहिने ९० प्रतिशत सरसमान भारत र चीनबाट आएको छ । तिहारमा…विस्तृत समाचार »
अप्ठ्यारो मोडमा ‘अस्थिर’ बाबुराम
२७ आश्विन २०७४
नजिकबाट संगत गर्नेहरु भन्छन्– बाबुराम भट्टराई स्वभावत निकै अस्थिर छन् । आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ माग्ने, तर आफूलाई फाइदा मिल्दा साथमा रहेकाहरुलाई पनि बेमतलव गर्ने ‘राजनीतिक अवगुण’ बाबुराममा छ । तर, बाबुराम आफ्नो स्वभावमाथि फरक टिप्पणी गर्छन् । ‘विज्ञानलाई विश्वास गर्ने बाबुराम संसार गतिशिल छ भन्ने ठान्छ र सँधै गतिशिल रहन्छ,’ उनी तर्क गर्छन् । तर, बाबुरामको गतिको परिभाषा केही काँचो लाग्छ । उनी एउटा…विस्तृत समाचार »
केआई सिंहका बडीगार्डको स्मरण : सिंहदरबार कब्जादेखि चीन निर्वासनसम्मको भित्री कथा
२१ आश्विन २०७४
केआई सिंह अर्थात् कुँवर इन्द्रजीत सिंह । विद्रोही नेता तथा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री । उनी होमियोप्याथी डाक्टर थिए । २००७ सालको क्रान्तिमा पश्चिम तराईबाट सक्रीय सिंह दिल्ली सम्झौतालाई धोका भन्दै आन्दोलन नछाडेका व्यक्ति हुन् । आन्दोलनकै क्रममा उनी पक्राउ परे र काठमाडौं ल्याइए । सिंहदरबारभित्रै कैद गरियो । तर, पछि त्यहाँ कार्यरत सिपाहीहरूलाई नै प्रभावमा लिई सिंहदरवार नै नियन्त्रण गरे सिंहले । १२ घण्टे त्यो असफल…विस्तृत समाचार »
कमरेड प्रचण्ड,के जनयुद्ध एमाले बन्नका लागि थियो ?
१७ आश्विन २०७४
केशबराज जोशी सोमबार माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबिच चुनावी एकता हुँदै पार्टी एकता हुने खबर एकाएक भाइरल बन्यो । कुनै पनि मुलुकमा दुई पार्टीहरु आपसमा मिल्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैन तर एकता र कार्यगत एकता किन र के का लागि भन्ने बहस गर्न जरुरी हुन्छ । के नेपालमा एमाले र माओवादी एकताको अनिवार्य आवश्यकता र बस्तुगत बाध्यता आइलागेको हो त ? आउनुस एमाले–माओवादी एकताको चर्चा,विगतदेखि वर्तमानसम्मको…विस्तृत समाचार »
कानुन पढ्ने २२ वर्षीया युवतीले किन रोजिन् पोर्न ? खुलाईन् एक हजार ४७ शब्दमा
१० आश्विन २०७४
म २२ बर्षकी भएँ र विगत तीन बर्षदेखि पोर्न फिल्ममा काम गरिरहेकी छु । म सधैँ सोच्थेँ, एकदिन वकिल बन्नेछु । तर, विश्वविद्यालयमा पहिलो वर्ष कानुन पढ्ने समयमा मेरो सोँच नै बदलियो । म धुमधामसँग मेहनत गरिरहेकी थिएँ । प्रत्येक दिन ७–८ घण्टासम्म अध्ययन गर्थेँ । पैसा कमाउने कुनै उपाय थिएन । त्यसो त मलाई पैसाको आवश्यकता पनि थिएन । पढ्नका लागि मलाई ‘लोन’ मिलेको…विस्तृत समाचार »
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त गुरुङ भन्छन् – मधेशमा उमेद्वारले फकाउँछन्, धक्याउँछन, नमाने दन्काउँछन्
प्रदेश नम्वर दुईको चुनावी प्रचार शैली र उम्मेद्वारले गरेको खर्चलाई हेर्दा लाग्छ । नेपाल एउटा सम्पन्न मुलुक हो । टोलटोलमा नाचगान हुन्छ । गाउँगाउँमा दिनदिनै भोजभतेर चलिराखेको छ । यति बेला दुई छाक खान मधेशमा समस्या छैन । उम्मेद्वारले दिल खोलेर खर्च गरेका छन् । आचारसंहिता भन्ने कुरा कसैले पनि सुन्न चाँहदैन यति बेला मधेशमा । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई दिनदिनै सचेत गराएको छ । स्पष्टिकरण…विस्तृत समाचार »
मैले आफैँ बलात्कार भएको मोबाइलमा रेकर्ड गरेँ
२६ भाद्र २०७४
२६ भदौ, काठमाडौं । १८ वर्षीया लिलियन कान्स्टेन्टिन अहिले विश्वभर चर्चामा छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले उनको एउटा निर्मम अनुभव​ समेटेर समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन् । एक वर्षअघि आफू बलात्कृत हुँदाको घटना मोबाइलमा रेकर्ड गरेकी लिलियनको अनुभव यतिखेर भाइरल भइरहेको छ । इंगल्याण्डको केन्स सिटीकी उनले आफू बलात्कृत हुँदाको घटना रेकर्ड गरेपछि प्रहरीले त्यसैको आधारमा अनुसन्धान चलायो । र, दोषिलाई कैद पनि गरिसकेको छ । त्यो…विस्तृत समाचार »
के हाम्रो बुद्धि घुच्चुकमै छ ?
६ भाद्र २०७४
झण्डै २० वर्षअघि एउटा ‘कर्कश ध्वनी’ ठोक्किएको थियो मेरा कलिला कानमा । हजुरबा मुर्मुर्रिएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘यही भएर हो, तिमी आइमाईहरुको बुद्धि घुच्चुकमा छ भनेको ।’ हजुरबाको त्यो बोलीमा हजुरआमा चुप बस्नु भएको थियो । म राम्ररी बुझ्दिनथेँ, के भन्न खोजेको ? जे होस्, हजुरआमाले केही गल्ती गर्नुभयो र हजुरबा रिसाउनु भयो भन्नेसम्म अनुमान लगाएको थिएँ । आज म त्यस्ता कुरा बुझ्ने भएकी छु ।…विस्तृत समाचार »
राप्रपा विभाजन : दुई दिनको पिरती टुट्यो बरिलै...
२३ श्रावण २०७४
२०४६ सालको परिवर्तनपछि राजतन्त्र संवैधानिक हैसियतमा पुग्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो । बहुदलीय व्यवस्थासँगै पञ्चायतका हस्तीहरु राजावादी रुझानका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाममा विभिन्न पार्टी गठन गरी राजनीति सुरु गरेका हुन् । यी राजावादी पार्टीहरुबीच पार्टी एकता र विभाजनको लुकामारी त्यस बेलादेखि नै चल्दै आएको छ । ‘एलिट’ स्वार्थका साथ स्थापित राप्रपा सुरुमै लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको नामबाट संचालित भएको थियो ।…विस्तृत समाचार »
मनकामनाका होटल कविहरू : खानाभन्दा कविता मिठो !
१६ श्रावण २०७४
शुक्रबार नै काठमाडौंबाट गएर कुरिनटारमा बसियो । सपरिवार थियौं, पाँच जना । यो अघिल्लो शुक्रबार (साउन ७ गते)को प्रसंग हो । छोरी जन्मिँदा, अन्तिम क्षणमा मनकामना माईलाई स्मरण गरेकी थिएँ । त्यसैले, मेरै जोडमा यो यात्रा भएको थियो । र मेरा लागि यो नै मनकामनाको पहिलो यात्रा थियो । शनिबार बिहान झिसमिसेमै उठेर नुहाइधुवाई गरियो । कुरिनटारमै पूजाका सरदम तयार पारियो । मुखमा पानीसमेत हालिएको…विस्तृत समाचार »